HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 2-SEP-2020
Wednesday September 02, 2020 - 10:37:41 in Wararka by Mogadishu Times
Beyle oo Ururka Jaamacadda Carabta kala hadlay Arrimaha Deyn Cafinta Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaal iya Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle ayaa shee gay inuu Shalay kulan la yeeshay xubno ka so cday ururka Jaamacad da carabta.Kulanka an ayaa k
Beyle oo Ururka Jaamacadda Carabta kala hadlay Arrimaha Deyn Cafinta Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaal iya Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle ayaa shee gay inuu Shalay kulan la yeeshay xubno ka so cday ururka Jaamacad da carabta.Kulanka an ayaa ku dhacay qa ab dhanka internerka ah, waxaana Ururka Jaamacadda iyo Beyle ay ka wadahadleen arimaha horumarinta dhaqa alaha. "Waxa aan Shalay shir muhiim ah la yee shay Ururka Jaamacadda Carabta oo aan ka wada hadalnay sidii ay nooga saamixi lahaaye en deymaha ay Soomaaliya ku leeyihiin" ayuu yiri Wasiir Beyle. Waxaa uu intaasi kusii daray"Waxa aan aad ugu mahad celinayaa Xoghayaha guud ee J.Carabta iyo dhammaan ka qeybgalayaashii shirka Shalay, Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay xoojiso isbaddalka Maaliyadda iyo horumarka dhaqaalaha dalka"
Weerar Gaari Looga gubay ciidanka dowla dda oo Ka Dhacay Duleedka Awdheegle
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo ba xaya weerar Al-shabaab ay ku qaadeen Saldh ig Ciidamadda Dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin Gobolka Shabe elaha Hoose.
Weerarkaan ayaa ka dhacay waddada xiriirisa degmada Awdheegle iyo deegaanka Lambar 60 ee G/Sh/Hoose.
Weerarkaan ayaa lagu gubay Gaari xamuul ah oo saad usiday ciidamada Dowladda Soom aaliya ee ku sugan Degmada Awdheegle.
Ilaa haatan lama oga khasaaraha ka dha shay weerarkaan ka dhacay gobolka Shabeel aha Hoose,marka laga reebo gaariga oo gubtay.Xigasho:simbanews.net
Qodobada Deni iyo Axmed Madoobe ay doonayaan in laga badalo heshiiskii Dhuus am areeb 3
Magaalada Muqdisho Shalay waxaa soo ga aray madaxweynayaasha maamullada Puntla nd iyo Jubbaland (Axmed Madoobe iyo Saciid Deni) kadib cadaadis uga yimid beesha caal amka waxey shir la yeelan doonaan dowladda dhexe.
Labadaan madaxweyne waxey qaadaceen ka qe ybgalka shirkii dhuus amareeb wajigiisa 3xa ad,mana aysan ku qancin qodobadii kasoo ba xay, sidaas darteed waxaa la leeyahay waxaa jirta 3 qodob oo la fahamsan yahay iney doon ayaan in laga badalo heshiiska.
Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ayaa ku lan gaar ah ku yeeshay M/Garowe, waxeyna xaqiijiyeen kaliya imaatinkooda M/Muqdisho.
warkii.com waxey heshay in 2da madaxw eyne ay ku dhawaad 10 qodob diidan yahiin, balse ay saddex ugu muhiimsan tahay, waxe yna doonayaan iney si gaar ah ugala heshiiya an Farmaajo.
Axmed Madoobe iyo Saciid Deni waxey do od ka qabaan qodob taabanaya xildhibaanada, wuxuu ku saabsan yahay kuraasta golaha shacabka oo la sheegay iney dooraneyso 301 ergo, waxaana ku jiri karta kuraasta la isku dar aayo iyo kuwa la dhigayo deegaano aan laga taageersaneyn Jubbaland iyo Puntland.
Waxa kale oo ay doonayaan labada madax weyne in madaxweyne Farmaajo uu ogolaado in go’aanka ugu dambeeya heshiiskooda ays an shaqo ku yeelan doonin golaha Shacabka, taas badalkeeda ay doonayaan heshiis walba oo ay la gaaraan Farmaajo ineysan door ku ye elan golaha shacabka maadaama madaxwey naha horay u sheegay in heshiis walba uu aya ga ku celinaayo.
Ugu dambeyntii waxaa jira qodob xasaasi ah oo ku saabsan cidda maamuleysa doorash ada soo socota, heshiiska Dhuusamareeb waj igiisa 3xaad waxaa ku qoran iney guddiga doo rashooyinka qaran maamulayaan.
Waxey aaminsan yahiin in guddigaan doora shada ay garab taagan yahiin Villa Soomaali ya, sidaas darteed waa qodob ka mid ah kuwa ugu adag ee la rabo in laga heshiiyo, Deni iyo Axmed waxey doonayaan in qodobaas wax la ga badalo. Xigasho:warkii.com
Cumar Finish oo isbedal ku sameeyay qaar ka mid ah Gudoomiyeyaasha Degmooyinka G/Banaadir
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna du qa magaalada Muqdisho mudane Cumar Max amud Maxamed (Cumar Fil ish) ayaa is badal ku sameey ay qaar kamid ah degmooyin ka Mu qdisho.
Guddoomiyihii hore ee deg mada Xamar Ja jab Guhaad Sh. Xasan ayaa loo magacaabay
Guddoomiyaha cusub ee degmada Dharke enley. Xoghayihii degmada Dharkeenley Max amed Suudi ayaa loo magacaabay Guddoom iya ha cusub ee Degmada Xamar Jajab.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Shibbis ayaa loo ma gacaabay Cali Axmed Cabdu lle.
Degmada Balcad oo yeelan doonta Dugsi Sare oo lagu baran doono Cilmiga Beeraha
Siihayaha wasiirka Waxbar ashada XFS ayaa Shalay gaa ray Degmada Balcad ee Go bolka Shabellaha dhexe.
Wasiir Goodax iyo wafdigii sa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay Balacad, wax aana ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa maamulka degmada iyo ardayda wax ka barata degmaas, isagoo dhagax dhi gay Dugsi Sare oo lagu baran doono Cilmiga Beeraha.
"Waxaan Shalay safar dhulka ah ku tagay Degmada Balcad ee G/Shabeellaha Dhexe, Is la markaana kasoo dhagax dhigay Dugsi Sare oo lagu baran doono Cilmiga Beeraha.Waxaan u mahadcelinayaa Gudoomiyaha Gobolka Sha beellaha Dhexe iyo shacabka degmada oo si diirran noogu soo dhaweeyay” ayuu yiri siihaya ha Wasiirka Waxbarashada Dowladda Sooma aliya cabdullaahi Goodax Barre.
Sii hayaha wasiirka waxbarashada ayaa dhawaan dhagax-dhigay goobo waxbarasho oo laga hirgaliyay Baardheere ,Garbahaareey iyo Dooloow Soomaaliya.
Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dal ka Koonfur Afrika
Koox hubeysan oo Burcad Koonfur Afrikan ah ayaa gudaha dalkaasi waxaaa ay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa Soomalida Ganacsiyada waaweyn ku leh dalk aas, iyaga oo goobta ka baxsaday.
Muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Mag acaabi jiray Xamuud Aadan Dhiblaawe ayaa Kooxda Burcadda ah waxaa ay ku dileen goo btiisa Ganacsi oo ku taalla Dalka Koonfur Afri ka, isaga oo u geeriyooday dhaawac culus oo ay Burcadda gaarsiiyeen
Mid kamid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheeg ay in gurmad ay u sameeye en muwaadinka Soomaal iyeed oo Kooxda Burcadda ah ay doonayeen inay dhac u geystaan,isla markaana ay ka badbaadiyeen walow Kooxda Burcadda aheyd ay muwaadinka Sooma aliyeed dileen.
Ciidamo ka tirsan booliska Koonfur Afrika ayaa tegay halka dilka uu ka dhacay, kuwaas oo badi markii ay dilalka dhacaan sameeya howlgallo walow aysan ku guuleysan inay qab taan Kooxaha dilalka u geysta Soomaalida.
Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa sanad walba dil, dhaawac iyo in la boobo hantidooda loogu geystaa dadka Ajaanibta ah oo ay Soo maalida u badan tahay, waxaana ilaa iyo hadda jirin cid isku howshay inay Ganacsatada Soomaalida ah badbaadiso.
Cumar Filish:-"Qaadista Dhagaxaanta aan Balanqaaday Wey Suurta Gali Weyday”,!
Munaasabadd lagu Maam usayay hal sano guuradii kas oo Wareegatay Markii uu xilka la wareegay Gudoomiyaha G/Banaadir ahna Du qa M/Mu qdisho Md.Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Xalay lagu qab tay Xa runta dhalinuarada ee G/Banaadir Mun asab adaan ayaa Waxaa ka soo qeyb galay Xildhib aanno Wasiiro Madaxda Degmooyinka Gobol ka Banaadir iyo Marti sharaf kale.
Gudoomiyaha MaamulKa G/ Banaadir Cumar Filish ayaa she egay muddadii san nadka aheyd ee xulka hayay waxyaabo badan u qabs oomeen,kuwa kalana uu wali qorsha ha ugu jiraan.
Dhanka kale Gudoomiyaha G/Banaadir ay aa sheegay in ku guuldareystay balanqaad kiisa ahaa in la furi doono wadooyinka xiran ee Magaaladda muqdisho.
Waxa uu sheegay in amniga Magaalada oo liita, iyo si loogu hortago qaraxyadda Al-sha baab ay fuliyaan uu doorbiday in ay sii xirnaa dan wadooyinka Magaaladda Muqdisho.
"Habeenkii aan xilka la wareegayay 29-kii Agoosto 2019, shacabka waxa ay doonayeen qaadista dhagaxaanta, waxyaabihii aan ballan qaaday ayay qayb ka ahayd, balse way noo su urageli waysay caqabadah amni darteed” ayuu yiri Duqa Muqdisho.
Xog: Maxay Axmed Madobe & Saciid Deni ka dalbadeen xubnaha beesha Caalamka?
Xog dheeri ah ayaa kasoo baxaysa kula ma dii shalay ay MMuqdisho ku yeesheen mad axweynayaasha Jubaland iyo Puntland iyo qa ar ka mid ah wakiilada beesha caalamka u jo oga Soomaaliya.
Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ayaa marka hore si kala gooni ah ula kulmay safiirka Mar eykanka, kadibna la shiray safiirada iyo wa kiilada kale ee beesha caalamka u jooga M/ Muqdisho.
Dhammaan kulammadaan ayaa intooda diir adda lagu saaray arrimaha doroashooyinka dal ka, heshiiskii Dhuusamareeb 3 iyo arrimo u ga ar ah 2da maamul goboleed, gaar ahaan maa mulka Jubaland. Axmed Madoobe iyo Saciid Deni,ayaa sida aan xogta ku helnay ka dalbad ay safiirka Mareykanka Donald Yamamoto in uu sharxo qoraal intii uu socday shirka Dhuu samareeb 3 lasoo dhigay twitter-ka safaaradda Mareykanka oo loo adeegsaday ereyga "qas-wadayaal”, taasi oo sida la sheegay safiirka uu sheegay inaan cid gaar ah loola jeedin, balse uu ku socday cid kasta oo diiddan in Soomaa liya ay horey u socoto.
Axmed Madoobe ayaa si gaar ah safiirka Mareykanka iyo wakiilada kale ee beesha caal amka uga dalbaday inay DFS kala hadlaan fa ro-gelin uu sheegay inay ku hayso gobolka Ge do, halkaasi oo ay ciidamo badan gaysay, si doo kalena ka dhistay maamul ka madax ban naan kan Jubaland.
Kulankii wadajirka ahaa ee Axmed Madoobe iyo Deni ay la yeesheen wakiilada beesha caal amka, ayaa dhanka kale si weyn diiradda loo gu saaray heshiiskii Dhuusamareeb 3, waxay na soo bandhigeen qodobo ay sheegeen ina an la aqbali karin oo heshiiska ku jira.
Qodobadaas ayaa waxaa ka mid ah in door ashooyinka ay maamulaan guddiga madaxa-bannaan ee doorashada, oo ay sheegeen inuu san dhex-dhexaad ahayn kuna xiran yahay Vil la Somalia. 2da madaxweyne ma dalban in gu ddiga meesha laga saaro, waxayse codsadeen in maamulka doorashada ay kaalin ku yeesha an dowlad goboleedyada.
Waxay sidoo kale dood ka keeneen qodob dhigaya in dhowr magaalo ay ka dhacdo doora shada, magaaladii amnigeeda uusan wanaag saneyna laga wareejiyo, taasi oo ay u arkaan isku day doorashada lagu gaynayo magaalo oyin ay gacanta ku hayso DFS.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya inay dalbadeen in kulanka Muqdisho laga soo qey b-geliyo madax goboleedyada kale ee ka ma qan. Si kastaba, ma cadda waxa beesha caa lamka ay ka qaban karto dhammaan dalabya da 2da madaxweyne goboleed, waxaana suur ta-gal ah inugu dambeyn ay in badan ka tanaa sulaan, si heshiis loo gaaro.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo kulan la qaatay Safiirka UK
Madaxweyne ku xigeenka maamul gobole edka Galmudug Cali Daahir Ciid ataa M/Muq disho waxa uu kula kulmay, safiirk dalka Ingiri iska ee So omaaliya Ben Fender.Madax we yne ku xigeenka iyo Safiir ka dalka Ingiriiska ee Soomaaliya, ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoo jin lahaa xiriirka dawlada UK iyo taageerada dawlad gobole edyada , gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug.
Safiirka ayaa uga mahad celiyay madax we yne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ku lankan uu Shalay la qaatay, waxa uuna u ball an qaaday in taageero buuxda ay ka heli doon to dawladda UK maamulka Galmudug.
Sidoo kale waxa uu uga mahadceliyay ha wlaha dardarta leh ee maamul Galmudug ay mudooyinka Galmudug ka qabteen dalka.
Madaxweyne ku xigeenka maamul gobo leedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maalm ihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muq disho ee caasimada dalka, isagoo intii uu joo gayna kulamo kala duwan la sameeyay musu uliyiin fara badan, kuwaas oo ay ka wada had leen arrimo kala duwan.
Ilhaan Cumar oo dacwad ka gudbisay Askari fal xun kula kacay Dad Muslimiin ah
Xildhibaanno ka tirsan Aqalka wakiillada Da lka Marayka oo ay ka mid tahay Ilhan Cu mar ayaa dacwad ka gudbiyay ciidamada ka hort agga qaxootiga & ku wacan shu uraha,ka dib ma rkii ay Dad Mus limiin ah oo xab si ku jira ay ku qasbeen inay cunaan Hilib Doo faar iyo raashin qurmay.
Dacwadda oo ay Xildhibaan nadu u gudbiye en Waaxda amniga gudaha Dalka Maraykanka ayay kaga codsadeen in baaritaan lagu same eyo dhacdadaan foosha xun ee lagula kacay Muslimiinta maxaabiista ah ee ku jira xabsi ku yaalla Magaalada Miami.
War-saxaafadeed ay si wadajir ah ugu saxii xnaayeen Xildhibaanada kala ah Ilhan Omar, Rashida Tlaib iyo Andre Carson ayaa lagu she egay inaysan arrintaani ahayn wax aan la aqb ali karin.
Maxaabiis Muslimiin ah oo ku jira xabsiga Krome ee Magaalada Miami ayaa lagu khasb ay inay kala doortaan Hilib Doofaar iyo Raa shin qurmay, sida ay sheegen Xildhibanadan.
Q/ Midoobey oo soo dhaw eys ay heshiiskii ay wada gaareen dhinacyada Suudaan
Xoghayaha Guud ee Q/Midoobay António Guterres ayaa soo dhoweeyay he shiiska nab adeed ee Dowladda Suudaan iyo hoggaamiya sha dhaqdhaqa aqyada hubeysan ay ku gaare en Koonfurta Suudaan,gaar ah aan M/Jubba.
Xoghayaha Guud ayaa hadal uu soo saaray uga mahad ce liyay dadka reer Suudaan he shiiska taariikhiga ah ee ay wada saxiixeen D/Suudaan,Jabhadda Kacaanka Suudaan iyo mucaaradka Ciidamada Xoreynta Suudaan ee uu hoggaamiyo Mona Minawi.
António Guterres,ayaa ku booriyay dhinac yada wadahadalada inay soo bandhigaan rabi taankooda siyaasadeed iyo sida ay uga go’an tahay inay ka shaqeeyaan gaaritaanka hadaf ka guud ee nabada. Isha SONNA.
Facebook oo hanjabaad u dirtay macaami isheeda Facebook ayaa ku hanjabay in macaamii shiisa ku sugan Australia uu ka mamnuuci doo no inay warka iskula wadaagaan bartaasi, xilli uu diyaarinayo sharci cusub oo ku qasbaya in uu lacag ku bixiyo warbixinnada ay macaamii shu ku soo daabacaan barta. Hay`adaha ma amula shirkad aha ayaa ka doon aya shirkada ha sida Facebook & Google inay lacag ku bixiyaan warbix innada dib loo daabaco. Bishii la soo dhaafay Google ayaa macaamiishiisa u ga dig ay in taasi ay ka dhalan karto in adeeg yadi isa wax baaritaanka ay ka sii daraan.
Tallaabadan ugu dambeysay ee Facebook ee lagu mamnuucayo in warka la iskula wada ago bartaas ayaa xiisad ka dhex dhalisay shirk adaha teknolojiyadda iyo hay`adaha maamula.
Facebook waxay sheegtay in haddii sharcigan cusub la dhaqan geliyo ay ka joojin doonto dad ka ku nool Australia inay warka iskula wadaag aan bartaas iyo barta kale ee ay maamu sho ee Instagram.
Madaxweynaha Venezuela oo raadinaya dad lagu tijaabiyo tallaalka coronavirus
Madaxweynaha Venezuela, Nicolas Mad uro, ayaa shaaca ka qaaday inuu raadin dono dad si mutadawacnimo ah loogu tijaabiya tallaalka fayraska Covid-19 ee uu soo saaray Ruushka. Ruushka waa dalkii ugu horreey ay ee si rasmi ah ugu dhawaaqo inuu helay tallaalka cudurka co ronavirus.
Hase ahaate tallaalkan waxaa shaki geliyay khubarrada caafim aadka ama sa ynisyahanna da kuw aas oo su`aal geliyay baahi da loo qabo tij aaboyinka. D/Ve nezuela ayaa balaay iin dool lar oo deyn ah ka heshay Ruush ka wa xayna sheegtay inay ka qayb qaadan doonto tijaabo oyinka caafimaad ee tallaalkan cusub ee uu soo saaray Rushka.
Weerar lagu dilay Askar oo ka dhacay Afghanistan
Ugu yaraan 3xubnood oo katirsan ciidamada dowlada Afghanistan ayaa la dilay ka dib mar kii dagaalyahanada Taalibaan ay weerar adag ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala bariga Magaalada Gardez, Sida ay sheegay wakaal ada wararka ee AP.
Abdul Rahman Mangal, oo ah afhayeenka maamulka gobolka Paktia, ayaa sheegay in u gu yara an 3 sargaaal ay kudhint een, shan sa rkaal oo kale lagu dhaawacay weerar ka, isaga oo in taa ku daray in ciid ama da ama anka ay dil een 2da nin oo weerar ka asi ku soo qaad ay caas imada gobolka.
Mangal wuxuu intaas ku daray in gaari walxa ha qarxa laga soo buu xiyay uu bartilmaameed saday iridda laga soo galo xarun ta ee Gardez, ka dibna laba nin oo hubaysan ay bilaabeen in ay toogtaan ciida mada ilaalada dadweynaha.
Afhayeen u hadlay UrurkaTaliban, Zabihull ah Mujahid, ayaa ku dhawaaqay, sheegasha da ko oxda ee masuuliyadda weerarka.
"Askar reer Afghanistan ah ayaa lagu dilay weerarkii Taliban ay ku qaadday xerada milit aryga Paktia” ayaa uu yiri.
Weerarka ayaa yimid ka dib markii Madax weynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu magic aabay gole 46 xubnood ka kooban oo dib-u-he shiisiinta qaran, kaasi oo leh go’aanka ugu da mbeeya ee ku saabsan in dowladdu ay heshiis nabadeed la saxiixato Kooxda Taalibaan. D/A fghanistan ayaa Bilo Ka hor Ku Dhawaqday,
in ay Albaabada u furi doonto K. Taalibaan.
Madaxwyne Farmaajo oo Muqdisho kula kulmay Deni & Axmed Madoobe
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo ayaa xalay Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxaa uu munaasabad Casho ah ugu qabtay Madaxweynayaasha Jub baland & Puntland oo shalay soo gaaray Muqdisho.
Inta ay munaasadda soco tay ayaa waxaa dhex-maray wada-hadallo gaar ah oo ay uga hadleen xaalada dalka tabashada ay ka qab aan qodobada shirkii M/Dhuusamareeb oo 2da Madaxweyne aysan ka qeyb-gelin.
Sidoo kale dhinacyada ayaa waxaa ay kulan kooda uga hadleen qabsoomida kulan gaar ah oo Maanta dhex-maraya kaas oo ay uga had layaan xaalada siyaasadeed ee dalka iyo Arr imaha doorashooyinka.
Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland ee Axmed Maxamed Islaam iyo Saciid C/hi De ni ayaa waxaa ay horay u diideen ka qeyb-gal ka shirkii Dhuusamareeb 3, iyaga oo sidoo ka le ka soo horjestay qodobadii kasoo baxay, ta as oo keentay inay yimaadaan M/Muqdisho.
Taliyaha cusub ee Hawlgalka AMISOM ay aa si rasmi ah ula wareegay Xilka Taliyaha Ho wlgalka AMISOM, waxaana Taliyaha lagu mag acaabaa Jeneral Diomede Na degeya, isa goo xilka kala wareegay Taliyihii hore ee Jene ral Tigabu Yilma.
Taliyaha Cusb ee lasoo ma gacabay ayaa waxaa uu u dhshay Dalka Bru ndi,isagoo Xilka kala wareegay Tigabu Yilma oo u dhashay da lka Ethiopia. Jeneral Dio mede Nadegeya ayaa waxaa la sheegay in uu leeyahay khibrad sare oo xagga Ciidanka, waxana la sheegay in uu Ciidanka Millateriga Brundi ka tirsanaa wax ka badan 38 sano.
Munaasabad ballaaran oo xilka uu kula wa reegayay Taliyaha Cusub ayaa ka dhacday xar unta Holwgalka Amisom, iyadoo Xfladda uu ka soo qayb galay Ergayga u qaabilsan Midowga Afrika arrimaha Soomaaliya Ambassador Fran cisco Madiera
Hoggaamiyaha sare ee Iran ayaa ku eedee yey Imaaraadka Carabta inay khiyaameeyeen dunida muslimka, markii ay go’aansadeen inay xiriir la yeeshaa Isr ael. Ayatollah Ali Khamenei ayaa khudbad laga sii daayey taleefishinka Talaadaadii waxa uu ku sheeg ay in Imaaraadka ay dhabarka ka mindiyeeyeen Islaamka, ay na weligood ceeb ku noolaan doonaan.
"Dabcan, khiyaanada Imaaradka masii jiri doonto, hase yeeshee ceebta ka raacday welig eed waa la xusuusan doonaa,” ayuu yiri Ayat ollah Ali Khamenei.